DF oo shaacisay wakhtiga ay soo daabaceyso lacagta shillin Soomaaliga cusub - Caasimada Online
Home Warar DF oo shaacisay wakhtiga ay soo daabaceyso lacagta shillin Soomaaliga cusub
DF oo shaacisay wakhtiga ay soo daabaceyso lacagta shillin Soomaaliga cusub
Muqdisho (Caasimada Online) – Xukuumada Somalia ayaa mar kale ka hadashay lacagaha Shilin Soomaaliga ee la filaayo in dhawaan lasoo daabaco si meesha looga saaro lacagta hadda la isticmaalo.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in si dhaqsi ah lagu soo daabici doono lacagta cusub ee la shaqo galin doono.
Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyl, ayaa sheegay in shuruudii ay la galeyn Bankiga Aduunka iyo Hay’adda lacagta ay ka soo gudbeen taas oo u sahli karta in lacagta cusub ay soo daabacaan, sida uu hadalka u dhigay.
Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, waxa uu intaa ku daray in xiligaan loo baahan yahay lacagtii lagu soo daabici lahaa maadaama DFS lagu leeyahay lacag farabadan oo deyn ah.
Wasiir Beyle oo wax laga weydiiyay xiliga lasoo daabacaayo lacagta ayaa sheegay in qorshaha saxda ah uu yahay in gudaha Sanadkaan lasoo daabici doono lacagta cusub ee Shillinka Soomaaliga ah.
“Gudaha sanadkaan ee aan ku jirno ayaan soo daabici doonaa lacagta waxaan qireynaa inay nagu adkaan doonto bixinta lacagta lagu soo daabacaayo tan cusub waayo waxaa nalagu leeyahay lacag badan”
Si kastaba ha ahaatee Wasiir Beyle ayaa hadalkaan ka sheegay kulan uu magaalada Brussles kula qaatay Mas’uuliyiin ka kala socotay Bankiga Aduunka iyo Hay’adda lacagta, kaas oo ahaa mid ay uga wad hadleen qorsha lacagta.